အဆိုတော် ဂျေညီညီ၏ကား နှင့် ဆယ်ဘီးကား မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပြီး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရ – J Nyi Nyi and car accident | MoeMaKa Burmese News & Media
အဆိုတော် ဂျေညီညီ၏ကား နှင့် ဆယ်ဘီးကား မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပြီး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရ – J Nyi Nyi and car accident
First Music Nnews ဂျာနယ်
ကားတိုက်ခံရပြီး ဘ၀ပျက်သလောက် ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် များနဲ့ အဆိုတော်ဂျေညီညီရဲ့ ရင်ဖွင့် စကားသံများအနုပညာ သမားအဖြစ် ရိုးသားသန့်ရှင်းစွာ ရပ်တည်ခဲ့သော ဂျေညီညီ၏ ဘဝပျက်စရာ ထိခိုက် အနုပညာသမားအဖြစ် ရိုးသား သန့်ရှင်းစွာ ရပ်တည် ခဲ့သော ဂျေညီညီ၏ ဘဝပျက်စရာ ထိခိုက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် စာနယ် ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် ပေါင်းများစွာ နဲ့ ရောက်ရှိလာ တဲ့ ဂျေညီညီရဲ့ရင်ဖွင့်စကားသံတွေက…”ပထမဆုံး ကျွန်တော် တောင်းပန်ချင်တာက ဒူးခေါင်းတွေ က ချုပ်ရိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့် ကြာကြာမတ်တပ်မရပ်နိုင်တော့ပဲ ထိုင်ပြီးပြောရတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ် ပေးပါ။ ၁၀-၅-၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကျွန်တော် အင်းစိန်ဘက်ကနေ မြို့ ထဲကို ကားနဲ့လာတယ်။ အဲဒီမှာ မြို့ ထဲဘက်ကနေ အင်းစိန်ဘက်တက် လာတဲ့ဆယ်ဘီးကားက ဘရိတ် ပေါက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုမျက်နှာချင်း ဆိုင်တိုက်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကအဲလောက်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ။ ဒီခေတ်ဆေးဝါးကုသ စရိတ်ကိုအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါက ကျွန်တော်ဂစ်တာတီးတဲ့ ထမင်းစားတဲ့ လက်ပါ။ မျက်နှာကလည်းရုပ်ပျက်၊ ဆင်းပျက်ပါပဲ။ ဒါတွေကို ပြန်ကုရဦး မှာလေ။ အဲဒီတော့သူတို့ပေးတဲ့ သိန်း ၄၀ ဆိုတာ နာနေတဲ့ကြားက ရယ် စရာကောင်းတယ်။ အဲဒါနဲ့ ၉-၆- ၂၀၁၂ နေ့က ကျွန်တော့်ကို တိုက်ခဲ့တဲ့ ………
အဲဒီလိုရင်ဆိုင် နေတဲ့နေရာမှာ အမှန်တရားအတွက် ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ပါ့မယ်”လို့ဆို သွားပါတယ်။
3 Responses to အဆိုတော် ဂျေညီညီ၏ကား နှင့် ဆယ်ဘီးကား မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပြီး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရ – J Nyi Nyi and car accident
mgoogyaw on July 10, 2012 at 3:49 am
Dear Ko J. Nyi Nyi,
It is very sad to hear that,you are suffering with many injuries, at your whole body,by car accident again. Last5-6 years ago,while your car was parking,in Shwe Gondine,road, smashed and hit by one lorry car. Now it happened again,and this time,even you are badly injured.Better be careful. I am one of your pals from Europe. They are so rude,to explain that,they cannot look after to you. Fight back as much as you can.I have heard your names,last many years ago, in Shine cafe,Mandalay.I will pray for you,Ko J. Nyi Nyi.
your fans on July 10, 2012 at 2:08 pm
အမြန်နေကောင်းကျမ်းမာဖို့ ..သီချင်းတွေသီဆိုနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။
Ngunjawa on July 11, 2012 at 6:36 pm
ငယ်စဉ်ကတည်းက အချစ်သီချင်းအဆိုတော် .. လေးစားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လည်ကျန်းမာလာပါမယ်။ အကျိုးပြုသီချင်းများစွာ ရေးဦးမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်..။ အောက်ကသီချင်းကတော့ မိသားစုတခုလုံး သမီး၃ယောက်ပါ သေဆုံး၊ ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတဲ့အချိန် စပ်ဆိုထားတဲ့ Amazing Grace ဖြစ်ပါတယ်။ လူသေဆုံးပေမဲ့ သီချင်းမသေတဲ့အပြင် သေလွန်ခြင်းတဖက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်း ဆုကိုရပါတယ်။ ဂျေညီညီအတွက် System failure ဖြစ်ချိန်မှာ အားပေးကြပါ။ မိုးမခရဲ့အားပေးဆောင်းပါးအတွက်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။